आँचल र केकी देउरानी जेठानी, के छ त कहानी ? « Mazzako Online
आँचल र केकी देउरानी जेठानी, के छ त कहानी ?
अभिनेत्री आँचल शर्मा र केकी अधिकारी जेठानी देउरानी बनेका छन् । छक्क पर्नुभयो । छक्क पर्नु पर्दैन । उनीहरु रियल लाईफमा होईन रिल लाईफमा जेठानी देउरानी बनेका हुन् । नायिकाहरु केकी र आँचल चलचत्रि झिंगे दाँउमा जेठानी देउरानी बनेका हुन्, जुन सिनेमाको यतिबेला धमाधम छायांकन भईरहेको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा सिनेमाको आफ्नो लुक्स सार्वजनिक गर्दै नायिका आँचल शर्माले लेखेकी छिन् जेठानी दिदी । सिनेमामा केकी आँचलको जेठानी दिदीको भुमिकामा छिन् ।
यो सिनेमामा केकी र आँचल दुबै गाँउले भुमिकामा देखिएका छन् । बिशेषत शहरिया भुमिकामा देखापर्दै आएकी आँचलको लागि भने यो भुमिका च्यालेन्ज पनि हुन सक्छ । यो चलचित्रमा मुकुन भुषाल पनि मुख्य भुमिकामा छन्, जसले बुलबुल चलचित्रबाट निकै राम्रो तारिफ पाएका थिए ।
ज्ञानेन्द्र देउजाको निर्देशनमा यो सिनेमाको सुटिङ्ग भईरहेको छ । फिल्म झिंगे दाउले ऐतिहासिक कथा भन्छ । साहित्यकार भीमनिधि तिवारीको कालजयी कथामा आधारित भएर ‘झिँगेदाउ’ बन्न लागेको हो । ‘झिँगेदाउ’ को अहिले भकुेन्डेबेसीमा छायांकन भैरहेको छ । त्यहाँ इनडोर छायांकनका सेट एबलष् निर्माण गरिएको छ ।
कपन गढी सिनेमा प्रा.लिको ब्यानरमा निर्माण भैरहेको फिल्मको गीतमा अर्जुन पोखरेलले संगीत भरेका छन् । भने, पटकथा एवं संवाद लेखक प्रदीप भारद्धाजले तयार पारेका हुन् । फिल्मलाई विष्णु कल्पितले खिचिरहेका छन् ।